राष्ट्रपतिलाई सपनाको प्रश्न : महिला राष्ट्रपति भएको देशमा पनि बालबालिकाको यस्तो हालत? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/राष्ट्रपतिलाई सपनाको प्रश्न : महिला राष्ट्रपति भएको देशमा पनि बालबालिकाको यस्तो हालत?
राष्ट्रपतिलाई सपनाको प्रश्न : महिला राष्ट्रपति भएको देशमा पनि बालबालिकाको यस्तो हालत?
चार वर्षअघि सुन्दर भविष्यको खोजीमा सदरमुकाम बेनी आएकी सपना रोका सही निर्णय लिन नसक्दा सडकमा पुगिन् । कक्षा ११ पढ्दा भागी विवाह गरेर बुटवल पुगेकी सपनाको वैवाहिक जीवन तीन महिना पनि टिक्न नसकेपछि घर न घाटको भएर तीन महिना सडकमा बिताउनुपर्यो । खान पुग्दो घर र अभिभावकको साथ छाडेर बरालिएकी सपनाले थुप्रै रात भोकभोकै बिताइन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
आत्मविश्वासका साथ गलत सङ्गत र दुव्र्यसनीको दलदलबाट निस्किएपछि १८ वर्षीया सपनाले शुरु गरेको बेवारिसे श’व व्यवस्थापन गर्ने कामले उनलाई विश्वकै प्रभावशाली १०० महिला बनाएको छ । बेलायतको ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशन बिबीसीले संसारका १०० जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा राखेपछि सपनालाई ‘सपना’ जस्तै लागेको छ ।
सपनाले काठमाडौँमा अलपत्र अवस्थामा भेटिएका बेवारिसे शवको दाहसंस्कार गर्दै आएकी छिन् । बेवारिसे श’व अस्पताल लगेर परीक्षण गर्नेदेखि पशुपति आर्यघाटमा लगेर संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गराउने काममा सपना खटिएकी छिन् । उनले हालसम्म करिब ३०० बेवारिसे श’वको व्यवस्थापन गरिसकेकी छिन् ।
आइतबार शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको भेटमा सपनाले राज्यले बेवारिसे व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको गुनासो गरिन्।
‘राष्ट्रपतिजस्तो ठाउँमा महिला हुनुहुन्छ। तर पनि हाम्रो देशमा महिला र बालबालिकाको अधिकारका लागि राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन’, सपनाले राष्ट्रपति समक्ष भनिन्, ‘हजुरको कार्यालयभन्दा एक सय मिटर पर जाने हो भने सडकमै दर्दनाक अवस्थामा भेटिन्छन् बालबालिका।’
राष्ट्रपति भण्डारीले भने यस विषयमा राज्यले काम गरिरहेको बताउँदै आफूले उठाएका विषय प्रधानमन्त्री समक्ष राख्ने आश्वसन दिएको सपनाले बताइन्।
आन्तरिकतर्फ हवाई उडान सुरु भएको पहिलो दिन बिहीबार नै ५६ सय यात्रुले लिए सेवा